Shily: Faritra Roa Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 12:25 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra 2006 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Nankatò faritra roa vaovao ao Shily ny kaongresy Shiliana. Ankehitriny, manana faritra 12 sy ny renivohitra Santiago i Shily. Araka ny fanazavan'ny iquiquenoticias:
Tamin'ny vato 106 manohana sy vato iray manohitra, nankatoavin'ireo mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny tolo-kevitry ny antenimieran-doholona mikasika ny tetikasa ara-dalàna hanangana faritra XV ao Arica y Parinacota sy ny faritany Tamarugal. Ao anatin'ny fepetra ho lalàna ankehitriny ny lahatsoratra.
Ny faritra hafa dia i Valdivia, ao atsimo. Manana olana ara-panadihadiana samihafa ireo faritra vaovao, Carlos Salas (ES) nanao fanadihadiana lalina mikasika toe-draharaha ara-politika vaovao; indrindra mikasika ny rafi-pifidianana roamiantoana (binominal), ary nifantoka momba ny fifidianan'ny antenimieran-doholona ny faritra vaovao:
Niteraka sehatra tena mahaliana hodinihana ny fifidianana nataon'ireo loholona satria ny fananganana faritra vaovao dia miaraka amin'ny fanitsiana ny rafi-pifidianana: izany hoe, mampifanaraka an-keriny ny rafi-pifidianana, manangana fari-pifidianan'ny loholona, mitovy amin'ny faritanin'i Arica sy Parinacota ary mifanojo amin'ny distrika ny fanitarana.
Noho izany, ho an'ny elatra havia na ny elatra havanana, mety ho fahafahana hanana mpikambana bebe kokoa ao amin'ny Kongresy izany. Manana fiantsoana amin'ny tarehimarika ihany koa ny faritra Shiliana, manomboka amin'ny laharana voalohany ao amin'ny faritra avaratra ary mifarana ao atsimo amin'ny isa 12. Momba ny fomba fitantanan’ ny kaongresy ireo isa vaovao ho an'ny faritra vaovao, hoy i Gonzalo Araya:
Manomboka androany, manana faritra 15 eto amin'ny firenentsika isika: amin'ireo faritra nampidirina ao Arica sy Parinacota (ao amin'ny sary), izay avy ao amin'ny Faritra voalohany, sy Los Rios, miaraka amin'ny Capitol Valdivia, izay hanjavona ao amin'ny Faritra faha-10. Ny zavatra hafahafa dia ny voalohany voalaza dia ny Faritra faha-15 ary Los Rios no Faritra faha-14 ao Shily. Be ireo fanontaniana nipetraka momba izany:
Nahoana no tsy manaja ny filaharana ara-jeografika ao amin'ny faritra ary manome isa ambany ho an'ny faritra ao amin'ny farany avaratry ny firenena?. Raha hitàna ny tarehimarika iray hafahafa (noho ny antony ara-pifidianana) izay mahatonga ny fanontaniana hoe:
Tsy ho lojika kokoa ve ny manome azy ireo ny isa XIII sy XVV amin'ny laharana ara-jeografika; Arika amin'ny isa XIII ary ny atsimo amin'ny isa XIV?
Tsy maintsy miandry ny fifidianana isika mba hahitana raha hisy vokany eo amin'ny sehatra ara-politika izany.